Virgil van Dijk oo si weyn u amaanay xidiga bar-tilmaameedka u ah kooxaha Barcelona, Juventus, Man City iyo Bayern Munich. – Gool FM
(Liverpool) 15 Nof 2018. Difaaca xulka qaranka Holand iyo kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa xaqiijiyay in saaxiibkiis ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee kooxda Ajax Matthijs de Ligt uu yahay mid ka mid ah difaacyada ugu fiican aduunka.
Virgil van Dijk ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska Telegraaf ee dalka England wuxuu kaga dhowr arimood waxyaabihii uu ka yiri waxaa ka mid ahaa:
“de Ligt wali waa xidig da’ayar ah ee aad u dagan, sidoo kale wuxuu garanayaa waxa uu doonayo, sifooyinkaas oo dhan waa waxa laga doonayo difaaca wanaagsan”.
Dhinaca kale Virgil van Dijk ayaa waxaa wax laga weydiiyay hadii ay Liverpool lasoo saxiixan karto Ajax Matthijs de Ligt wuxuuna ku jawaab celiyay.
“Kooxda waxay heysataa ciyaartoy cajiib ah, iyo indho indheeyaal aad u wanaagsan, kuwaasoo khibrad wanaagsan u leh inay lasoo saxiixdaan ciyaartoy wanaagsan, laakiin hadii Reds ay weydiisato taladeyda, diyaar ayaan u noqon doonaa”.
Difaacan da’ada yar ee kooxda Ajax Matthijs de Ligt ayaa qaab ciyaareedkiisa uu soo jiitay dhamaan kooxaha waaweyn ee Yurub ay ugu horeeyaan Barcelona, Juventus, Manchester City iyo Bayern Munich.
Laacibka West Ham Marko Arnautovic oo ay ku dagaalamayaan muruq weynayaasha Premier League